Jubbaland oo digniin kama danbeys ah u dirtay Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Jubbaland oo digniin kama danbeys ah u dirtay Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid...
Jubbaland oo digniin kama danbeys ah u dirtay Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig
Maamul gobolleedka Jubbaland ayaa sheegay in markan uu ka dhamaaday sida ay hadalka u dhigeen dulqaadkii ay u hayeen Cabdinaasir Seeraar Maax iyo Cabdirashiid Xidig oo labaduba sheegtay in ay madaxweynayaal ka yihiin maamulka Jubbaland.
Wasiirka Wasaarrada Warfaafinta maamul gobolleedka Jubbaland Cabdi Xusseen Maxamed ayaa sheegay in muddo Lix bilood ay ay u dulqaadanayeen labada mas’uul, laakiin wixii hadda ka danbeeya aan loo sii dulqaadin doonin, waxaana uu ku eedeeyay in ay falal amaanka ka dhan ah ka wadaan magaalada Kismaayo.
”Waxey u adeegayaan oo ay ka amar qaataan dowladd dhexe, falal amaan darro ayeey ka wadaan magaalada Kismaayo, maamulka Jubbaland wuu ka dhamaaday dulqaadkii uu u hayay labada mas’uul” ayuu yiri’ Wasiirka oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Kismaayo.
Previous articleAmnesty oo ku eedeeysay dowladda Farmaajo inay hanjabaad iyo cago juglyan ku hayso xorriyadda saxaafadda
Next articlePresident Farmajo time to evaluate his time in office on his final year Grade D+